200-125 300-115 200-105 200-310 640-911 300-075 300-320 300-360 642-998 QV_DEVELOPER_01 400-101 700-501 117-201 70-696 700-505 600-199 400-351 300-207 TE0-141 100-105 300-101 300-206 300-070 70-417 210-260 210-060 200-355 300-208 CISSP 300-135 210-065 300-209 70-243 70-480 CCA-500 2V0-621D 210-451 400-051 E05-001 1Z0-052 70-410 640-916 VMCE_V9 810-403 070-464 070-243 700-802 70-246 FCBA GPHR DEV-401 C2090-610 SY0-401 712-50 ADM-201 700-039 312-50 MA0-101 648-244 SK0-004 ASF 70-494 70-673 500-005 1Z0-060 C9560-503 640-875 N10-006 98-367 70-534 NS0-505 70-342 CHFP 070-410 640-878 1V0-603 1Z0-804 C8010-250 312-50V9 C2150-508 98-368 CLOUDF 70-411 70-461 220-901 70-488 070-341 PK0-003 E20-547 70-412 70-686 500-285 CISM 101-400 102-400 PDM_2002001060 JN0-100 642-883 CAP 070-347 talo Guud: Noloshu Waa Kalsooni ,akhriso qormo xiisa badan | UfeynNews.com
Maanta waxaan idiin soo gudbinaya qormo gaaban oo ku saabsan kalsoonida aniga oo jecel in qoroomiynka kalsoonida la xariira wax badan oo ka mid ah aan idiin soo gudin doono.
Tiro iyo cadad maleh dad ayagoo is jecel haddana hadalkii isla fahmi waayay taas oo sababto aakhir in lagu kala tago balse waa Muhiim inaad wax badan ka ogaataa halka aay dawadaadu ku jirto.
kalsoonidu waa shey qaali ah mar haday lumtana sida lagu so celsho waa ay adkaanaysaa balse naftaada ka dhaadhici in dhigaagu uusan lahyn wax qalad ah ka ilaali tashuushka qalbigaaga si noloshaada farxadi ugu soo dabaaqdo.
Dhalinta Maanta waxa ay caado iyo dhaqan ka dhigteen iney asbuucba qof lahaasaawaan taas oo sababab u ah kalsooni daro heysata, Qofkan noloshaada kuso biiray waxa uu kugu leeyahay xuquuq aad sareysa waa inad baxnaanisaa si aad nolosha iskula qeybsataan.
Kalsooni darada waxaa ubadan dhalinta maanta oo kuwada haasaawaya Aalada Internetka oonan labada qofi sifiican iskugu qancin karin, gabadhu ama wiilku waxa uu isku dayayaa inuu ogaado sirtaada waxa dhacaysa in eey is heybiyaan ama is weydiiyaan Lanbar Sireedkooda si loo ogaado qofkan waxa uu Kuhaayo gudaha Internetka waana sheyga ugu badan ee kala taga ama Kalsooni darada keena.
Ku Kalsoonaaw had iyo jeer Lamaankaaga si noloshaada farxad ugu soo dabaasho, way fududatahay inad afka ka tiraahdo wan kugu kalsoonay balse uurka sida aad uga rumeyso way adagtahay taasna waa mida inagu wada keenta burburka joogtada ah, labada qofi hadii kalsooni dhab ahi isku qaadaan hoygaasi waxa uu noqonayaa mid bidhaama xaqiiqdii.
Waxaa mahad iska leh Alle noo suuro galiyey inaan soo gudbino dhawaan waxaan soo gudbnin doono qormooyin badan oo ku saabsan arimaha Bulshada.